China Cell Therapy Turnkey Project emepụta na ndị na -eweta ya IVEN
Ọgwụ mkpụrụ ndụ (nke a na-akpọkwa ọgwụgwọ mkpanaka, ntụgharị mkpụrụ ndụ, ma ọ bụ cytotherapy) bụ ọgwụgwọ nke a na-agbanye mkpụrụ ndụ nwere ike ịbanye, nyado ma ọ bụ tinye ya n'ime onye ọrịa ka o wee nwee mmetụta ọgwụ, dịka ọmụmaatụ, site na ịgbanye mkpụrụ ndụ T nwere ike ịlụso ọrịa kansa ọgụ. mkpụrụ ndụ site na mgbochi mgbasa ozi nke sel n'oge usoro ọgwụgwọ immunotherapy, ma ọ bụ grafting sel stem iji weghachi anụ ahụ na-arịa ọrịa.
Ọgwụ mkpụrụ ndụ CAR-T:
AT cell bụ ụdị lymphocyte. Mkpụrụ ndụ T bụ otu n'ime mkpụrụ ndụ ọbara ọcha dị mkpa nke sistem na -alụso ọrịa ọgụ ma na -arụ ọrụ dị mkpa na nzaghachi mgbochi ọrịa. Enwere ike ịpụta sel T site na lymphocytes ndị ọzọ site na ọnụnọ nke onye na-anabata T-cell (TCR) n'elu sel ha.
Stem cell ọgwụgwọ:
Stem cell therapy bụ ọgwụgwọ anaghị emerụ ahụ nke na-achọ iji dochie mkpụrụ ndụ mebiri emebi n'ime ahụ. Enwere ike ibunye ọgwụgwọ mkpụrụ ndụ Mesenchymal n'usoro n'usoro site na IV ma ọ bụ gbanye ya na mpaghara iji lebara saịtị ụfọdụ anya, dabere na mkpa onye ọrịa.
Ọgwụ mkpụrụ ndụ, oge ọgwụgwọ mkpirikpi chọrọ yana mgbake ngwa ngwa karịa, dị ka “ọgwụ dị ndụ”, yana uru ya nwere ike ịdịru ọtụtụ afọ.
Nke gara aga: Ntanetị na -ejuputa katọn
Ọgwụ mkpụrụ ndụ CAR-T
Ọgwụgwọ mkpụrụ ndụ stem
Ampoule Machine À Coudre Bernina, Igwe Ampoule À Coudre Led, Igwe Ampoule À Coudre Singer, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Igwe eji emejuola agịga,